Phyo Ei Hlaing's Likes - Myanmar Network
Phyo Ei Hlaing's Likes
Back to Phyo Ei Hlaing's Page
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူများ အကြားစွမ်းရည် လေ့ကျင့်… [Zawgyi] အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူများအတွက် လေ့လာစရာ စာအုပ်စာတမ်း၊ မှတ်စုများဟာ ယခုအခါ အွန်လိုင်းမှာရော ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာပါ အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ အကြားစွမ်းရည်အတွက် လေ့ကျင့်ဖို့ကတော့ လေ့လာသူမျာ… Discussion အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူများ အကြားစွမ်းရည် လေ့ကျင့်… 51 Likes
သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုန… (၁၀) GALVANIZE အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ။ (ကြိယာ) အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းတို့ဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်အား ထုံးစံအရ တစ်ခုခုပြုလုပ်ရန် စေ့ဆော်သည်။ အစားထိုးနိုင်သော စကားလုံး - motiva… Discussion သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုန… 8 Likes သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုန… ကျောင်းနေစဉ်ကာလတစ်လျှောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျောင်း၏ အိမ်စာတာဝန်များ ရေးသားလာခဲ့ပြီးနောက်တွင် သင်၏ စာစီစာကုံးများတွင် စကားလုံးသုံးရန် ရွေးချယ်သောအခါ သုံးဖူးပြီးစကားလုံးများကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်သုံးမိခြ… Discussion သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာဆရာအထင်ကြီးသွားစေရန် အသုံးပြုန… 29 Likes နားလည်သလို ပြန်ပြောခြင်းနှင့် ထပ်တူလိုက်ပြော… ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးအချို့မှာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အခါ ပါဝင်တဲ့ ဗွီသုံးလုံး (Vocal = အသံ၊ Verbal = စကားအသုံးအနှုန်းနဲ့ Visual = အမူအရာ) တွေအကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ နားထောင်ပုံ စတိုင်အမျိုးမျိုး အကြောင်… Discussion နားလည်သလို ပြန်ပြောခြင်းနှင့် ထပ်တူလိုက်ပြော… 52 Likes သင်အမြဲပို့သင့်သော အီးမေးလ်များ [Zawgyi] မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် လောက်မှာ လူတစ်ဦးလျှင် နေ့စဉ်အီးမေးလ် လက်ရှ်ိပျမ်းမျှ အရည်အတွက် ၁၂၁ ခု မှနေပြီး ၁၄၀ ခု အထက် တိုးလာလိမ့်မည်ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီလောက… Discussion သင်အမြဲပို့သင့်သော အီးမေးလ်များ 24 Likes အင်တာနက်တွင် အင်္ဂလိပ်လို ချက်တင် (chatting) လ… &lt;Zawgyi&gt;အခုခေတ်မှာ အားလုံး အင်တာနက်နဲ့ချည်း ဆက်သွယ်နေကြတော့ အင်တာနက်မှာ ချက်တင် (chatting) လုပ်တဲ့ ဘန်းစကားတွေကိုလည်း နားလည်ထားဖို့ အရေးကြီးလာတယ်။ အထူးသဖြင့် စာရိုက်ရလွန်းလို့ လက်ညောင်းလာရင် အဲ… Discussion အင်တာနက်တွင် အင်္ဂလိပ်လို ချက်တင် (chatting) လ… 182 Likes
စံပြ ဆက်ဆံပြောဆိုကောင်းသူများ၏ အလုပ်ခွင်သုံး… သင်ဟာ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို ကျွမ်းကျင်တယ်၊ ပြဿနာ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းတတ်တယ်။ လုပ်ငန်းတွေအချိန်မှီ ပြီးဆုံးအောင် လုပ်ကိုင်တတ်တယ်ဆိုရင် လုံလောက်ပြီလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ NACE လို့ ခေါ်တဲ့… Discussion စံပြ ဆက်ဆံပြောဆိုကောင်းသူများ၏ အလုပ်ခွင်သုံး… 26 Likes အလုပ်ခန့်အပ်သူများက အလုပ်ရည်ညွန်းထောက်ခံချက်… [Zawgyi]ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသည့် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တစ်စောင်နှင့် အင်တာဗျူးနည်းနာတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိပါက အလုပ်လျှောက် ထားသူတစ်ဦးသည် လစ်လပ်သောနေရာအတွက် လျာထားခြင်းခံရကောင်းခံရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အောင်မြင်ေ… Discussion အလုပ်ခန့်အပ်သူများက အလုပ်ရည်ညွန်းထောက်ခံချက်… 15 Likes
သင်က ဖန်ခွက်တစ်ဝက်ပြည့် လူစားမျိုးလား (နေ့စဥ… စာဖတ်သူတစ်ဦးက မကြာသေးမီက နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စာမှာ သုံးတဲ့ idioms (အထာနှင့်ပြောသောစကားလုံးများ) အကြောင်း ရေးသားပေးရန် တောင်းဆိုလာပါတယ်။ ဒါကတော့ တောင်းဆိုသင့်တဲ့အရာ တစ်ခုလို့ ထင်မြင်ရပါတယ်။ တကယ်တန်းဆိုလ… Discussion သင်က ဖန်ခွက်တစ်ဝက်ပြည့် လူစားမျိုးလား (နေ့စဥ… 46 Likes
သင်၏ အရေးအသားကို ပိုမိုပြောင်မြောက်စေမည့် စာ… သင့်အရေးအသားကို ရေးနည်းရေးဟန်အမျိုးမျိုးသုံး၍ တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့် အရေးအသားသည်ပို၍ ပညာသားပါလာပြီး ဖတ်ရတာလည်း ပိုပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းလာပါလိမ့်မည်။ ဒီလိုအမျိုးမျိုးသော ရေးနည်းပုံစံတွေက သင… Discussion သင်၏ အရေးအသားကို ပိုမိုပြောင်မြောက်စေမည့် စာ… 44 Likes ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အ… [Zawgyi] ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လူသုံးများတဲ့ အီဒီယမ်တွေနဲ့ သူတို့ကို သုံးနှုန်းပုံ ဥပမာများကို လေ့လာကြပါစို့။ 1. A for effort (ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် အဆင့် ' A ' ပေးခြင်း) တစ်စံ… Discussion ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အ… 40 Likes နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင် ရေးသူ - ခင်နှင်းစိုး ကျမ အသက် ၁၂ နှစ်မှာ မိဘများနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားဆိုတာနှင့် စတင်ရင်းနီးခဲ့သည်။ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ကစပြီး က… Discussion နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင် 69 Likes Charles Wallace Burma Trust Visiting Fellows… Charles Wallace Burma Trust နှင့် ဗြိတိသျှကောင်စီတုိ့မှ ပူးပေါင်း၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်ပညာရှင် (mid-career professionals) များအတွက် အတတ်ပညာတိုးတက်ရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် Fellowship အစီအစဉ်မျ… Discussion Charles Wallace Burma Trust Visiting Fellows…5Likes ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ အခမဲ့ online IELTS သင်တန်း Understanding IELTS: Techniques for English Language Tests သင်တန်းကြေး - လူတိုင်းအတွက် အခမဲ့ သင်တန်းစတင်မည့်နေ့ - စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် (တနင်္လာနေ့) သင်တန်းကာလ - ၆ ပါတ် (၁ ပါတ် လျှင် ၂ နာရီ) သင်တန်းဆရာ -… Discussion ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ အခမဲ့ online IELTS သင်တန်း 61 Likes တယ်လီဖုန်း အင်္ဂလိပ်စာ [Zawgyi]နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ ရုံးဌာန၊ အရောင်းဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေသူ ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ… Discussion တယ်လီဖုန်း အင်္ဂလိပ်စာ 45 Likes ကော်ဖီနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဝေါဟာရ အခေါ်အဝေါ်များ [Zawgyi]ကော်ဖီသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူကြိုက်အများဆုံးသော သောက်ဖွယ်ရာအရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဤ vocabulary သင်ခန်းစာတွင် ကော်ဖီနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဝေါဟာရများကို ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ Caffeine (ကဖိန်းဓာတ်) ကေ… Discussion ကော်ဖီနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဝေါဟာရ အခေါ်အဝေါ်များ 46 Likes Modal verb "Can't" နဲ့တွဲတဲ့ idiomatic expre… [Zawgyi]အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါ စကားလုံးတွေ သိရုံ၊ သဒ္ဒါ မှန်ကန်ရုံ၊ အသံထွက် မှန်ရုံလောက်နဲ့ ပြောနိုင်တယ် ဆိုရင်ဘဲအတော် ဟုတ်နေပြီလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သဘာဝကျကျ ပြောဖို့ရယ်၊ စကားကို အလှပြင်ဆင်ေ… Discussion Modal verb "Can't" နဲ့တွဲတဲ့ idiomatic expre… 54 Likes အခြေခံဝေါဟာရသင်ခန်းစာ - The Living Room (ဧည့… [Zawgyi] အင်္ဂလိပ်စာဝေါဟာရများ လေ့လာမှုအနေနှင့် အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့ living room (ဧည့်ခန်း) အတွင်းမှာ ရှိတတ်တဲ့ ပစ္စည်းများရဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို လေ့လာကြပါမယ်။ Living room (ဧည့်ခန်း) ကို တစ်ခါတစ်ရံလည်း lounge (… Discussion အခြေခံဝေါဟာရသင်ခန်းစာ - The Living Room (ဧည့… 32 Likes အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်း (Participati… The following phrases are used to participate inameeting. These phrases are useful for expressing your ideas and giving input toameeting. အောက်ပါစကားစုများသည် အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် ပါဝင်တက်ရောက်တဲ… Discussion အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်း (Participati… 69 Likes
အမျိုးသား ကျောင်းဆရာ ခေါင်းစဉ်က "အမျိုးသား ကျောင်းဆရာ" ဆိုတော့ အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျားတို့ အမျိုးသားကျောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်တို့ရဲ့ National School တွေက ကျောင်းဆရာလို့ ထင်သူက ထင်ကြမယ်။ ပြောချင်တာက အမျိုး… Discussion အမျိုးသား ကျောင်းဆရာ 39 Likes ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အလွန်အမင်းကြောက်စိတ် ၁၀မျ… [Zawgyi[ပိုးကောင်မွှားကောင်တွေကို ကြောက်တတ်တဲ့စိတ် ရှိနေသလား။ မြွေတွေကိုရော ကြောက်တတ်လား။ အမျိုးသားစိတ်ကျန်းမာရေးဌာန၏ အဆိုအရ တစ်စုံတစ်ခုကို အလွန်အမင်းကြောက်စိတ်ဟာ အရွယ်ရောက်သူ၏ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာရှ… Discussion ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အလွန်အမင်းကြောက်စိတ် ၁၀မျ… 29 Likes